Mayelana NATHI - Hebei Jinqu Metal Products Co., Ltd.
I-Hebei Jinqu Metal Products Company Ltd. yasungulwa ngonyaka we-2005 e-Anping County. Le nkampani ihlanganisa indawo engama-30,000m2, ifaka ama-workshop wokukhiqiza amane, indawo yokugcina izinto ezimbili kanye nomhlangano wokuhlola.
Onjiniyela bethu banokuhlangenwe nakho kweminyaka engaphezu kwengu-10 futhi samukela i-OEM kanye nokwenza ngokwezifiso.
Umcwaningi mabhuku we-Price uzokulawula ngokuqinile izindleko futhi aqinisekise ukuthi wonke amakhasimende angakuthola okukhokhile.
Singabantu ezikhethekile wire mesh yokukhiqiza nokuthumela. Amalahle amalahle we-grill ngomunye wemikhiqizo yethu eyinhloko.
Futhi alahlwayo izoso hlupha anezikhala zamukelwa kakhulu ezimakethe Japan, Korea, Malaysia, Singapore, Australia nokunye.
Okukhishwa nsuku zonke kwe-BBQ grill yizicucu ezingama-300,000. Uku-oda okujwayelekile eJapan yiziqukathi eziyi-12 ngenyanga.
Sinekhono lokukunikeza ikhwalithi ephezulu ye-BBQ wire wire mesh ngentengo yefektri nokulethwa okusheshayo.
Sisebenzise umugqa wethu wokukhiqiza kanye ne-grilling mesh kufaka phakathi i-stainless steel grill mesh, Round bbq grill mesh, Square barbecue mesh, Grill net with handles, Grill mesh grate, Japan disposable grill wire mesh, Korea disposable grill mesh.
Umsebenzi wethu ukuhlinzeka ngezinsizakalo zethu ezihamba phambili ngokuzinikela okuphelele nobuqotho ngenkathi sigcina izindinganiso eziphakeme zekhwalithi nokusebenza, ukunikela ngesixazululo sebhizinisi esisha futhi esisebenzayo esisisiza futhi ekuholeni ngokuzibophezela ukweqa okulindelwe yikhasimende lethu, ukudala izimo zokusebenza nezokuphepha zabasebenzi bethu ezinamathuba amakhulu okubasiza bakhule nenkampani.
Siyathemba ukuthi ngokuxhaswa yibo bonke ozakwethu namakhasimende nangokuqhubeka nokuphikelela nokuzinikela kwabantu bethu, yonke imizamo yethu yesikhathi esizayo izoqhubeka nokuba yimpumelelo.
Gcina futhi ukhuthaze ithonya lomkhiqizo wethu enkambini yocingo lwe-Grill wire.
Intengo ilingana nenani futhi insizakalo ithuthukisa inani, senza amakhasimende abe yisimo sokuwina.
Kungani ukhetha thina?
1) Ngokukhiqizwa kwentambo enezintambo iminyaka engaphezu kwengu-15
2) Ithimba Lokuthengisa Lobungcweti.
3) isevisi ephelele emva kokuthengisa
4) unjiniyela onolwazi nesisebenzi esinamakhono
5) Uthembekile futhi unesibopho
6) Ukuhlolwa komkhiqizo ngaphambi kokulethwa.
7) Imboni yethu iseduze nokulayisha ichweba, ilula kakhulu ukuthunyelwa.
8) Isitifiketi se-ISO9001, i-SGS nokuhlolwa komuntu wesithathu